Ebee ka ịga na Mee: Ebe kachasị mma 10 gburugburu ụwa | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Ebe njegharị, Nduzi
Anyị chọrọ ịgwa gị n'isiokwu a banyere ebe aga njem na Mee: isi iri na-aga. Ihe kpatara ya bu ihe di mfe: oge ​​opupu ihe ubi na-eweta ihu igwe di nma, ubochi di ogologo ma otutu ojoo amalite. Dị ka a ga - asị na ihe a niile ezughi, oge udu mmiri amalitebeghi n'Eshia na udu mmiri ahụ apụtabeghị na South America.
Ihe a niile na-eme njem na May bụ nnukwu echiche. Na mgbakwunye, hotels na-adịkarị ọnụ ala karịa oge ọkọchị na ọtụtụ ebe na-eme ememme akụkụ akpali nnọọ mmasị. Ọ bụrụ n ’ihe a niile ị gbakwunye na mpaghara ndị njem anaghị ejupụta na Julaị ma ọ bụ Ọgọstụ, ị nwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji chee echiche ebe ị ga - aga njem na Mee. Anyị ga-egosi gị ụzọ iri kachasị mma iji mee ya.
1 Ebe aga: Mee kacha mma 10, site na ndịda Spain rue ụsọ osimiri Philippines
1.1 Prague, ebe egwu na-aga na Mee
1.2 Porto: ebe iga njem na Mee ma oburu na ichoro ihe di iche
1.3 Normandy, ala nke ugwu di egwu
1.4 Seville, ezigbo okomoko
1.5 New York bụ ezigbo nzọ mgbe niile
1.6 Saịprọs, bụ ọla dị na Mediterenian
1.7 La Palma, njem dị iche na Canary Islands
1.8 Bantayan, obi iru ala nke agwaetiti Philippine
1.9 Córdoba, amara nke Caliphal City
1.10 Costa Rica, ala nke ogige ntụrụndụ
Ebe aga: Mee kacha mma 10, site na ndịda Spain rue ụsọ osimiri Philippines
Ebe anyị ga-agwa gị gụnyere agwaetiti ndị yiri nrọ, ụsọ osimiri na-enweghị atụ, ọtụtụ ihe ncheta na emume ọdịnala ndị ama ama n'ụwa niile. Anyị ga-amalite njem anyị na ebe ndị anyị ga-aga Mee.
Prague, ebe egwu na-aga na Mee
Katidral nke Prague na Katidral
Isi obodo mpaghara Czech Bohemia Ọ bụ saịtị mbụ anyị nyere gị ndụmọdụ. Dị ka a ga - asị na nnukwu ihe nketa ya bụ obere ihe, site na etiti May ruo mmalite June ọ na - eme ya Ememe Music International International. Nnukwu ìgwè ndị egwú na ndị na-eduzi nzukọ na-ezukọ n’obodo ahụ iji mee egwu na-agaghị echefu echefu.
Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ egwu n'anya, anyị na-atụ aro njem gaa Prague iji nwee ọ enjoyụ ihe omume a. Na, site n'ụzọ, akwụsịla nleta obodo Castle na Mala Strana, ebe ị ga-ahụ ihe ncheta ndị dị egwu dị ka Prague Castle n'onwe ya, ndị Katidral St. Vitus ma ọ bụ dị oké ọnụ ahịa Charles mmiri. Ọzọkwa, echefula ịgagharị Meto Star, mgbe ochie obodo ebe ị ga-ahụ Lọ Nzukọ Ochie ya na mbara igwe ya.
Porto: ebe iga njem na Mee ma oburu na ichoro ihe di iche
Porto, ebe kachasị mma iji gaa May
Eleghị anya obodo kachasị mma na Portugal bụ Lisboa osimiri kachasị mma na mba ahụ nọ Algarve. Agbanyeghị, Porto nwekwara ọtụtụ ihe ị ga-enye gị. Maka ndị na-ebido, ekwupụtala obodo ochie ya Ihe Nketa Uwa maka owuwu dịka katidral ya, obí ya nke Stock Exchange, ụka na ụlọ elu nke Clérigos ma ọ bụ ọtụtụ akwa mmiri ya gafere osimiri Duero.
Ma, na mgbakwunye, ịnwere ike ịnụ ụtọ mbara ala dị egwu nke Onye Ribeira, ebe ha ga-enye gị achicha achicha ama ama na obere mmanya a ma ama nke Port. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata usoro ịme nke abụọ, ị nwere ọtụtụ wineries n'akụkụ nke ọzọ nke Duero.
N'ikpeazụ, akwụsịla ịga ihe ngosi nka nke obodo Portuguese. Anyị na-adụ gị ọdụ Oge Ochie, nke dị na Casa del Infante, nke e dere na narị afọ nke iri na atọ; onye nke Gbọ ala eletriki, ya na ugbo ala ochie ya, na Soares na-eme Reis National, nke na-egosi akụkụ buru ibu nke ọrụ nke onye na-akpụ ihe na-enye ya aha ya, otu n'ime ihe ndị a kasị mara amara na Portuguese akụkọ ihe mere eme.
Normandy, ala nke ugwu di egwu
Ugwu nke Étretat
Odiri n'ebe ugwu nke Francia, Normandy mara mma n'oge a. Ọ bụrụ na ị gaa na ya, ị ga-ahụ ọnụ ugwu ndị mara mma dịka ndị a Éonyeoma, ma ọhịa ọhịa na-eleghara ihe English ọwa na ala ndị ọzọ mara mma.
Also nwekwara ike ịhụ obodo akụkọ ihe mere eme dị ka Rouen, ebe a gbara ya oku Joan nke Arc na nke ahụ nwere ihe ncheta dị ka Katidral nke Nwanyị Anyị, ọla dị na ụdị Gothic; nnukwu Abbey nke Saint-Ouen na Chọọchị nke Saint-Maclou, ihe atụ abụọ nke Flamboyant Gothic, na ụlọ mara mma nke Hotel de Bourgtheroulde, na-agbanwe na ụdị Renaissance.
Nleta ọzọ ị na-agaghị echefu na Normandy bụ Le Havre, nke ebe akụkọ ihe mere eme bụ Ihe Nketa Uwa maka nnukwu katidral Renaissance ya, ụlọ elu nke ụlọ ụka Saint-Joseph na ihe ncheta ndị ọzọ.
Mana karịa ihe niile, ịnweghị ike ịhapụ Normandy na-agaghị eleta ya agwaetiti Mont Saint-Michel, nke na-ahapụ ọnọdụ agwaetiti ya mgbe ebili mmiri gafere na ebe nnukwu Benedictine Abbey nke otu aha ahụ dị, nke jikọtara Carolingian, Romanesque na Gothic.
Seville, ezigbo okomoko
Kwesighi ịhapụ Spain ịhọrọ ebe ị ga-aga na Mee. Isi obodo Andalus bụ ebe dị ebube iji nwee obi ụtọ. Na Seville ị nwere ihe ncheta magburu onwe ya dịka ọmarịcha ya Katidral na-enweghị ihe dị obere Giralda; ihe ụlọ elu nke Gold ma ọ bụ Ezigbo Alcazar, ọla nke na-ejikọta ụdị Gothic na Mudejar.
Oge a, ma ọ bụghị ihe ngosi dị egwu Ogige Spain, nke ewuru maka Ibero-American Exposition nke 1929 nke na-atọkwa ụtọ nha ya na ọdịdị ya. Ọzọkwa, echefula ịgagharị na mpaghara ya mara mma dịka Triana ma ọ bụ nke Santa Cruz na nke di oké ọnu-ahia Ogige Maria Luisa.
Mana, na mgbakwunye, Seville nwere mmasị ọzọ n'oge a. Ná mmalite nke May ya ama mma, na ọkụ ọkụ ọdịnala na ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ mmanya na egwu nke ala ahụ.
New York bụ ezigbo nzọ mgbe niile
Anyị na-agbanwe mba na kọntinent iji kpọọ gị ka ị gaa New York, nzọ njem na-anaghị ada ada. Oge ọ bụla bụ oge dị mma iji gaa "obodo nke skyscrap." N'ime ya, ị nwere ike ịmalite njem njem gị Times Square, ama ama nke nnukwu ákwà. Mgbe ahụ ị nwere ike ịga leta agbata ha, ọkachasị Brooklyn o Harlem, ma gafere Central Park ma obu lee ihe ngosi na Broadway.
Mana ihe ị na - enweghị ike ịkwụsị ime bụ ịhụ Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe, na agwaetiti ellis, ebe ụmụ amaala si n'akụkụ ụwa niile bịara ịchọ nrọ nke America na nke bụ ihe ncheta maka ịkwaga, yana ụlọ ngosi ihe nka dịka Obodo ukwu nke Art, otu n’ime ụdị ndị kasị ukwuu na nke kachasị mkpa n’ụwa.
Saịprọs, bụ ọla dị na Mediterenian
Nature nke Saịprọs
Ihe njirimara dị iche na nke gara aga nwere ebe ọ na-aga ugbu a anyị kwadoro. Saịprọs bụ ngwakọta zuru oke nke oke osimiri na ọdịdị ala dị egwu na ihe nketa akụkọ ihe mere eme na-enweghị atụ. Banyere nke mbụ, anyị na-akwado Nissi y Makronisos, ebe i nwekwara ike na-eme ndakpu mmiri.
Banyere nketa, na Saịprọs ị ga-ahụ ọmarịcha ebe obibi ndị mọnk Ọtọdọks dị ka nke Saint Irakleidios na ochie castles dị ka nke kolossi, nke ndi Knight nke San Juan wuru, n’akuku Iglesias dị ka ndị nke Troodos massif, ghọtara dị ka Ihe Nketa Uwa.
N'aka nke ọzọ, n'isi obodo nke mba ahụ, NicosiaHave nwere ọmarịcha ihe ngosi nka ebe ị nwere ike nyochaa akụkọ ihe mere eme nke agwaetiti ahụ site na Neolithic ruo oge Ottoman. Ma tupu i nwee ike ihu ihe ochie mgbidi wuru nke ndị Venice, nke gbara obodo ochie ahụ gburugburu nke a na-enweta n'ọnụ ụzọ dịka Famagusta.
La Palma, njem dị iche na Canary Islands
Roque de los Muchachos, na La Palma
Iji zaa ajụjụ ebe aga njem na Mee, anyị na-atụ aro agwaetiti ọzọ n'okpuru. Anyị na-aga ịgwa gị banyere La Palma, otu n'ime ndị kasị nta mara na Canary Islands, ma jupụtara ikpọ Okirikiri ala, nrọ osimiri na-ahụkarị obodo.
Mara dị ka "agwaetiti mara mma", ọ bụrụ na ị gaa na ya, ị pụrụ ịnụ ụtọ ájá ebe dị ka ndị nke Port nke Naos, Green puddle o Ndị Cancajos. Ọzọkwa oke ọhịa ahịhịa laurel na ugwu mgbawa dị egwu dị ka nke Enwere m onye ndu ma ọ bụ Caldera de Taburient, nke emebere ogige obodo dum.
N'ikpeazụ, na Ọdụ ụgbọ elu Santa Cruz de la Palma, isi obodo nke agwaetiti ahụ, ị ​​nwere ihe ncheta dịka ụka nke San Francisco na Santo Domingo, ike dị ka Catlọ Santa Catalina na ọmarịcha ụlọ ndị dị ka ya Otlọ Sotomayor ma ọ bụ Houselọ Isi nke Salazar.
Bantayan, obi iru ala nke agwaetiti Philippine
Osimiri Sugar, na Bantayan
Asia bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị mgbe niile iji bie ezigbo ezumike, mba ndị a kacha eleta na kọntinent a Ha bi n'ụlọ nke ebe dị egwu, mana ọ bụrụ na ijide n'aka na ebe ị na-aga njem na Mee kwesịrị inwe ụsọ osimiri, tụlee ịgbaga na agwaetiti Philippines nke Bantayan. N'etiti osimiri nrọ ya, anyị na-akwado nke ahụ KOTA, nke ire-ya bu ájá; Sugar nwere; nke Paradise ma ọ bụ ọbụna ihe jupụtara na nkume na i nwere ike ịhụ na agwaetiti na-amaghị nwoke, nke ị ga-enweta site na ịgbazite otu n'ime obere ụgbọ mmiri mpaghara, akpọ akụ.
Really nweghi ọtụtụ ihe ị ga-eme na Bantayan. Ewezuga mpaghara aja e kwuru na mbụ, ị nwere ike ịga ije Omagieca Obo-Ob Mangrove Ecopark, a eke ohere nke nnukwu mangroves. N'ọnọdụ ọ bụla, n'ime ebe aga njem na Mee, nke a bụ otu n'ime ndị nwere osimiri ka mma na obi iru ala.
Córdoba, amara nke Caliphal City
Ọ bụ oge dị mma iji gaa obodo Andalusia nke Córdoba. Ọ bụghị n'efu, ọ bụ otu n'ime ndị nwere ihe ncheta ama ama Ihe Nketa Worldwa gburugburu ụwa. Fọrọ nke nta enweghị isi bụ na anyị na-agwa gị banyere ya ikpọ Mobere, ugbu a bụ Katidral nke Assumption nke Nwanyị Anyị; nke ihe nketa ya nke Rom; nke ochie Juu nkeji iri na ise ebe ị ka nwere ike ịga na Oflọ Sepharad na ụlọ nzukọ; nke baths caliphal ma ọ bụ nnukwu Alcazar nke Ndị Kraịst nke Ndị Kraịst.
N'otu aka ahụ, n'èzí obodo ị nwere mgbagwoju anya Medina azahara, otu ugwu, na-esote Alhambra na Granada, nke ụlọ ndị Alakụba na Spain. Ma, ọ bụ na, na mgbakwunye, n'oge ọnwa nke May Córdoba na-agba ya Party nke Patios, kwupụtara Ihe Okike mmadu, na kwa Mee na-eme ememme.
Costa Rica, ala nke ogige ntụrụndụ
Irazú Volcano, na Costa Rica
Anyị gbanwere ụdị njedebe ọ ga-emecha ndepụta anyị ebe ịga njem na Mee. Costa Rica pụtara ìhè maka ọdịdị obi ụtọ ya. Ezigbo ihe akaebe nke a ị nwere na nke gị Ogige ntụrụndụ mba, ufodu ugwu ma ndi ozo di n’etiti ala gbara osimiri okirikiri.
Banyere nke mbụ, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị hụ otu site na ugwu ugwu Arenal o onye Irazú, ma, maka sekọnd, ha dị ndị Cahuita, tinyere coral reef ya na oke mmiri ya na-ekpo ọkụ; onye Barra Honda, ya na ọgba ya, ma ọ bụ Carara si, ya na osisi ala ya.
Nke ikpeazụ dị ihe dị ka otu narị kilomita site na San José, isi obodo mba ahụ. N'ime ya, ị nwekwara ike ịhụ ụlọ neoclassical dị egwu dị ka Lelọ nke Moor, Post na Telegraph ma ọ bụ nke Theaterlọ ihe nkiri mba, yana Katidral Metropolitan na chọọchị nke ebere, na owu ọmụma na Carmen. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ebe ndị ọzọ na Costa Rica, anyị na-agba gị ume ka gụọ isiokwu a.
Na mmechi, ọ bụrụ na ị na-eche ebe iga na may, anyị egosila gị ebe iri na-aga n'ịma mma ha n'oge ahụ. Ugbu a, ọ bụ gị ka ọ dị n’aka ịhọrọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Ebee ka ịga na Mee: 10 kacha mma ebe